Onye na-achịkwa ọkụ: mepụta nke gị ka ị gbanye ọkụ gị | Akụrụngwa n'efu
Light regulator: mepụta nke gị iji dozie ọkụ gị
Ugbu a enwere ọtụtụ bọlbụ smart nwere ike ịchịkwa site na ngwa mkpanaka ma ọ bụ site na ụfọdụ ndị na-enyere aka site na iwu olu. Smartlọ Smart, ma ọ bụ ụlọ dị mma, dị na ejiji, ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịmalite ịmụ etu usoro ndị a si arụ ọrụ, ị nwere ike ịme nke gị dimmer n'ụlọ
Iji ya i nwere ike na-achịkwa ike nke oriọna ma ọ bụ bọlbụ iji mepụta ikuku ịchọrọ. Ikwusi ike maka mgbe ị gụrụ, ọmụmụ ihe, wdg, yana obere iwepụta ikuku na-anabata nnabata mgbe ịchọrọ izu ike ...
1 Kedu ihe bụ dimmer ma ọ bụ dimmer?
1.2 Egwuregwu arụ ọrụ
2 Mmejuputa iwu na Arduino
Kedu ihe bụ dimmer ma ọ bụ dimmer?
Un dimmer, ma ọ bụ ọkụ ọkụ, bụ ngwaọrụ nke nwere ike ijikwa voltaji dabere na ndị na-achịkwa voltage ma ọ bụ triacs. Nke a na-agbanwe volta nke ruru bọlbụ na ike ya ga-agbanwe dabere na ọkọnọ voltaji. Dịka ọmụmaatụ, na nke a, m ga-egosi onye nchịkwa na m ga-agbakọta ogologo oge gara aga maka ọrụ na usoro elektrọnik.
Ọ dị mfe, dị ọnụ ala, enwere ike iji ya ọ bụla ot oriọna oriọna. Iji mepụta ya, lee ntuziaka ndị a ...
Ihe ị ga - achọ maka ọrụ Mee N'onwe Gị a bụ inwe nkà nke onye mere ya na ihe mfe dị ka:
Eriri ọla kọpa Bifilar maka ọkọnọ eletriki.
Nkwụnye ijikọ njikọ ọ bụla iji nye ike.
Glass fuuz nke 5A, nke F nọchitere na atụmatụ ahụ. Nhọrọ, ị nwere ike iji njigide njigide, iji mee ka ọ dị mfe ịgbanwe fuuz ahụ, ọ bụ ezie na enwere ike ire ya ozugbo.
Igbe mkpuchi o itinye. I nwekwara ike 3D bipụta ya ma ọ bụrụ na ị nwere onye nbipute, ma ọ bụ jiri osisi mee ya, wdg. Ọ ga-abụ nkwado na mkpuchi maka sekit ahụ.
Mbadamba circuit ka ịdekọ ya na sekit kwesịrị ekwesị ma ọ bụ a bred.
Ihe ngosi Triac BT137 y ikpo oku maka triac.
Diac BR100 ma ọ bụ ihe ndị na ya nhata.
2x 39nF / 250v polyester capacitors (C1 na C4). Ọzọ 2x 22nF / 250v polyester capacitors (C2 na C3).
Linear nwere ike Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. (P1), ga-arụ ọrụ dị ka onye na-eme ihe iji nwee ike iji aka ya dozie ike ahụ.
Nguzogide nke 12K 0,5w (R1) na nguzogide ọzọ nke 100Ω 0,5w (R2).
Choke eriri igwe na ferrite (L).
Splice taabụ ijikọ mmepụta (S) na ntinye (E).
Tin soldering (ọ bụrụ na ị gaghị eji bọọdụ bred).
Egwuregwu arụ ọrụ
Na ihe ndị a niile, ị ga-ewepụta ihe ndị a okirikiri eletrik:
Ozugbo enwere ihe niile, nsonazụ ahụ o kwesiri ibu ihe dika:
Na na-arụ ọrụ ị kwesịrị ị nweta nsonaazụ na-esonụ:
Mmejuputa iwu na Arduino
Ugbu a ọ bụrụ na ị chọrọ ịzọpụta mmiri y jiri arduino ịrụ dimmer, ị nwekwara ike ịme ya naanị. N'ezie, ha na-ere Ikanam modul modul maka AC ruo 240V dị ka nke a, iji mee ka ihe dịrị gị mfe. Nhazi ya di nfe ...
Enwekwara oru di mfe iji hazie ike nke DC LED, obu ezie na nke ahu abughi ihe anyi na acho ebe a ...
para mee ka anyita dimkpa, ya na Arduino, I nwere ike ime ya n'ọtụtụ ụzọ. Nwere ike iji ọtụtụ ihe sitere na atụmatụ gara aga iji mepụta ọrụ a:
Ị nwere ike iji a modul:
You pụrụ ọbụna iji WiFi modul ike smart ìhè ...
Dị ka ị pụrụ ịhụ, na ohere ha dị ọtụtụ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » Light regulator: mepụta nke gị iji dozie ọkụ gị
DS3231: ezigbo oge elekere na kalenda maka Arduino gị